ဇော်အောင် (မုံရွာ) – အနိမ့်ကျဆုံးသောဘဝကျရောက်နေသူများကို အားပေးကူညီခြင်း (အိမ်ဖော်အကြောင်း စကားလက်ဆုံ) | MoeMaKa Burmese News & Media
အခုခေတ်မှာတော့ အိမ်ဖေါ်အလုပ်ကိုင်ကို မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နိုမ့်ကျတယ်လို့ မထင်ပါဘူ။ မြန်မာအချင်းချင်းဖြစ်လို့ နားလည်မှုရှိစွာနဲ့၊ အိမ်ရှင်၊ အိမ်ဖေါ် ဆက်ဆံရေးကောင်းပါတယ်။ မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်လဲ ပြန်ပေါ့။ အချုပ်အနှောင်တွေ မရှိပါဘူး။
စင်ကာပူမှာ အိမ်ဖေါ်လာလုပ်တဲ့အခါ လူကို ရောင်းကုန်လိုသဘောထားပြီး၊ အလုပ်မလုပ်ချင်ရင် ရော်ပေးရမယ်ဆိုပြီး၊ အိမ်ဖေါ်အလုပ်လုပ်သူ ကို အေးဂျင့်များက မတရားချုပ်ကိုင်ထားပါတော့တယ်။ ဘာကြောင့် အိမ်ဖေါ်အလုပ် စင်ကာပူမှာလာလုပ်ရပါသလဲဆိုရင်တော့ အဓိက မြန်မာပြည်ရဲ့ အလုပ်ကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရသစ်က ပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်များ ဖော်ဆောင်နေပေမဲ့ အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းတွေများလာဖို့ မြန်မာအစိုးရသစ်ကကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ အိမ်ဖေါ်လာလုပ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မိန်း ကလေးများ အဖို့ ပြသနာနည်းပါးပေမဲ့ မြန်မာနဲ့အင်ဒိုနီးရှား မိန်းကလေးများအဖို့ ပြသနာများစွာဖြစ်ရပါတယ်။ မြန်မာအိမ်ဖေါ်ပြသနာများကို လိုက်လံကူညီပေးနေတဲ့ ဒေါ်အေးမာမာကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
စင်ကာပူမှာနေထိုင်သူ အနိုမ့်ဆုံးအလုပ်အကိုင် လုပ်နေရသူမြန်မာအိမ်ဖေါ်များရဲ့ ဘဝပိုမို ကောင်းမွန်ရေး၊ လုပ်ဆောင်ပေးနေသူ အများ အပြား ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူအစိုးရကလည်း ပြသနာမဖြစ်အောင်၊ အိမ်ရှင်-အိမ်ဖေါ် ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင် လုပ်ပေးနေကြပါတယ်။ အများအားဖြင့် အဆင်ပြေလေ့ရှိပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာအိမ်ဖော်များ အခက်ခဲ၊ ပြသနာကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ကူညီပေးနေသူ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ဒေါ်အေးမာမာနဲ့အမေး၊အဖြေ အိမ်ဖော်အကြောင်းစကားလက်ဆုံအဖြစ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေး။ ဒေါ်အေးမာမာ ခင်ဗျား၊ မြန်မာများ စင်ကာပူကိုအိမ်ဖေါ်အဖြစ် လာရောက်အလုပ်လုပ်ရခြင်းအကြောင်းကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ။ စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ တိုးတက်ကြွယ်ဝလာတာနဲ့၊ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများလည်း အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ အိမ်မှာ ကလေးငယ်၊ မိဘအဖိုးအဖွားများကို အမျိုးသမီးမရှိချိန် ပြုစု၊ကြည့်ရှုပေးမဲ့လူ လိုအပ်လာပါတယ်။ အရင်ကတော့ အိမ်အလုပ်ဟာ ဇနီးအလုပ်ပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများထဲက ခေါ်ပြီး အိမ်အလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ အခုတော့ စင်ကာပူမှာ လုပ်အားခတွေက အရမ်းဈေးကြီးလာလို့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားဆိုရင် တနာရီအနည်းဆုံး ၈ ဒေါ်လာအထိ ဖြစ်လာတယ်။ အိမ်ရှင်မတွေလည်း အပြင်ထွက်လုပ်တော့ တစ်လကို ဒေါ်လာ တစ်ထောင်၊ နှစ်ထောင် ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများက ဆင်းရဲတော့ စင်ကာပူကို တစ်လလစာငွေ ဒေါ်လာသုံးရာ၊ လေးရာ လောက်ရရင်တောင် လာလုပ်ချင်သူ များလွန်းလို့၊ နောက်ဆုံး အိမ်ဖေါ်အလုပ် စင်ကာပူမှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာပါတယ်။ ၂၀၁၃ အချက်အလက်အရ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အိမ်ဖေါ်နိုင်ငံခြားသား ၂သိန်း၁သောင်းကျော် ရှိပါတယ်။ အိမ်၅အိမ်မှာ တစ်အိမ်က နိုင်ငံခြားအိမ်ဖေါ် ငှားကြပါတယ်။ မြန်မာများလည်း ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ကအလွယ်တကူ ပတ်စပို့လုပ်နိုင်၊ ထွက်လာနိုင်တော့ ဘာအရင်းအနှီး၊ ပညာအရည်ချင်း မရှိတဲ့ မိန်းမများအတွက် အိမ်ဖေါ်လုပ်ငန်းက ထွက်ပေါက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ အခု ၂၀၁၄မှာ ခန့်မှန်းခြေ မြန်မာအိမ်ဖေါ် ၃သောင်းလောက် ရှိနိုင်ပါတယ်။
အဓိကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ ဝင်ငွေကောင်းလာလို့၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကလည်း ဆင်းရဲလို့ စင်ကာပူမှာ အိမ်ဖေါ်လုပ်ငန်း ထွန်းကားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်တဲ့ အမေရိကား၊ ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား၊ တိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင် နိုင်ငံတွေမှာ အိမ်ဖေါ်လုပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ အထူးသဖြင့် လစာငွေအများကြီးပေးရလို့ အိမ်ဖော်မငှားနိုင်ပါဘူး။ လူ့အခွင့်ရေးသတ်မှတ်ချက်တွေလည်း အရမ်းမြင့်တော့ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ အိမ်ဖေါ်လုပ်ငန်း စင်ကာပူလို မထွန်းကားပါဘူး။ စင်ကာပူက အိမ်ဖေါ်အတွက်အစိုးရကောက်ခံငွေ Levi ဒေါ်လာ ၃၀၀လောက် ၊ အေးဂျင့်ဖိုး၊ ဗီဇာဖိုး တွေပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စင်ကာပူမှာ နိုင်ငံခြားအိမ်ဖေါ်ငှားရင် အနည်းဆုံး တစ်လဒေါ်လာ ရှစ်ရာနဲ့တစ်ထောင်လောက် ကုန်ပါတယ်။
အိမ်ဖေါ်ခေါ်ခွင့်ရဖို့ မိသားစုဝင်ငွေသတ်မှတ်ချက် မှီရပါမယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဝင်ငွေကောင်းရမယ်။ မိမိအိမ်အတွက် ဥပမာ ကလေးငယ်ရှိခြင်း၊ အသက်ကြီးအဖိုးအဖွားရှိခြင်း များကြောင့် အိမ်အကူ လိုအပ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရပါမယ်။
စင်ကာပူရောက် မြန်မာအိမ်ဖေါ်များကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
– အိမ်ရှင်ရဲ့ ကလေးများကို ကြည့်ရှု၊ ကျောင်းပို့ပေးခြင်း
– အိမ်ရှင်ရဲ့ အသက်ကြီးအဖိုးအဖွားများကို ကူညီပေးခြင်း …
အများစု မြန်မာအိမ်ဖေါ်များဟာ မြန်မာအချင်းချင်း၊ မိမိဆွေမျိုး၊မိတ်ဆွေများထဲက စိတ်ချရသူများကိုခေါ်လို့ ရောက်လာသူ မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက်တော့ ပြသနာလုံးဝမရှိသလောက်ပါပဲ။
မေး။ ပြသနာဆိုတော့၊ လက်ရှိမြန်မာအိမ်ဖေါ်များ ပြသနာဖြစ်ရပုံတွေကို အကျဉ်းပြောပါပေးပါဦးဗျ..။
ဖြေ။ လောလောဆယ်၊စင်ကာပူမှာ အမှုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးအချို့ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ ကူညီလိုသူများအတွက် ကျမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ထဲမှာလည်း သင့်လျှော်သလို့ ဖေါ်ပြပေးပါတယ်။ ပြသနာများရဲ့ အဓိကအကြောင်းကို သုံးချက်ပြောချင်ပါတယ်။ *အိမ်ရှင်ရဲ့မတရားခိုင်းစေမှု (အကျင့်စာရိတ္တညံ့ဖျင်းမှု) * အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ကျွမ်းမှု၊ *အိမ်ဖေါ်ရဲ့ ဗဟုသုတ၊ပညာ၊မိတ်ဆွေ နည်းပါးမှု၊ တွေကြောင့်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးရောက်လာပြီး ၃လအတွင်းမှာ အိမ်ရှင်၊ အိမ်ဖေါ် ဆက်ဆံရေးပျိုးထောင်ရပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်လာအောင် လုပ်နိုင်ရင် အိုကေပါတယ်။ အလုပ်စချိန်အတွင်းမှာပဲ ပြသနာတွေများလာရင်တော့ Maid Transfer ဆိုတဲ့ အိမ်ဖေါ်အသစ်ပြောင်းတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အစဦးဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေတဲ့အခါ အိမ်ဖေါ်ပဲခံရပါတယ်။
၁။ အိမ်ရှင်ရဲ့မတရားခိုင်းစေမှု (အကျင့်စာရိတ္တညံ့ဖျင်းမှု) ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် အိမ်ဖေါ် အင်္ဂလိပ်စကားတတ်တယ်။ ဗဟုသုတ၊ပညာ၊မိတ်ဆွေ ရှိတယ်ဆိုရင်လဲ အကျင့်စာရိတ္တညံ့ဖျင်းတဲ့ အိမ်ရှင်များကြောင့် ပြသနာကြီးများဖြစ်ရပါတယ်။ အိမ်ဖေါ်ကို လူလိုမမြင်ပဲ ကျွန်လိုမြင်ပြီး၊ တိရိစ္ဆာန်လို သဘောထားတဲ့ အိမ်ရှင်များရှိပါတယ်။ သူတို့မိသားစုတစ်ခုလုံး အဖိုး၊အဖွား၊ သားသမီး အားလုံးက အလုပ်နဲ့နှိပ်စက်၊ ရိုက်ပုတ်နှိပ်စက်၊ အဆိုးဆုံးကတော့ နှုတ်နဲ့မခံနိုင်အောင် အော်ငေါက်၊ ဆဲဆို၊ အလွန်နစ်နာအောင် ပြောဆိုမှုတွေက အခံရအခက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောပူတာခံနိုင်တယ်၊ နားပူတာမခံနိုင်ဘူး ..ဆိုတဲ့အတိုင်း အချို့အိမ်ရှင်များ ခွဲခြားဆက်ဆံ၊ နှိမ်ပြီးပြောဆိုခံရမှုတွေကြောင့် အိမ်ဖေါ်များဒေါသကြောင့် ကလေးငယ်များ၊ အဖိုးအဖွားကြီးများကို မသိမသာပြန်ပြီး နှိပ်စက်ပါတယ်။ လူမဆန်တဲ့ဖြစ်ရပ်များအားလုံးနီးပါးက အိမ်ရှင်ရဲ့မတရားခိုင်းစေမှု၊ အိမ်ရှင်ရဲ့ စာရိတ္တညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်။ ငွေကြေးအရမ်းလိုအပ်နေတဲ့ အိမ်ဖေါ်အမျိုးသမီးများကို ငွေနဲ့မျှားပြီး မတရားကျင့်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းများ အထူးသဖြင့် အကျင့်ယုတ်တဲ့ အိမ်ရှင်အမျိုးသားကြောင့် အိမ်ဖေါ်များ၊ ဘဝပျက်ရပါတယ်။ မခံနိုင်တဲ့အိမ်ဖေါ်များက ထွက်ပြေးပါတယ်။ ဘယ်လိုမှပြေးလို့မရတဲ့အိမ်ဖေါ်များအဖို့ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်တဲ့အထိ ဖြစ်ရတာ သိပ်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်။
၂။ အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ခြင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် မိန်းကလေးက ၁၀တန်းအဆင့်လောက်ရှိရင် တော်တော်အဆင်ပြေလေ့ရှိပါတယ်။ ခက်တာက မိန်ကလေးက အင်္ဂလိပ်စကားနားမလည်နဲ့၊ မြန်မာစာတောင် အတန်းပညာမတတ်သူဖြစ်နေရင် ပြသနာဖြစ်ဖို့လမ်းများနေပါပြီ။ ပညာနည်းပါးတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကို နားလည်ဖို့ တော်တော်ကြိုးစားရပါတယ်။ အိမ်ရှင်က ဖေးမသင်ကြားပေးရင်းနဲ့ သုံးလလောက်ကြာတော့ အင်္ဂလိပ်စကား ထမင်းစားရေသောက် တတ်လာပါတယ်။ တောနယ်များကလာတဲ့ မြန်မာအိမ်ဖေါ်များဟာ ပညာနည်းပါးလို့၊ အင်္ဂလိပ်စကားတတ်ဖို့ ခက်ခဲသူများဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အိမ်ဖေါ်ဗဟုသုတမိတ်ဆွေမရှိခြင်း။ အိမ်ရှင်များဟာ အိမ်ဖေါ်ရောက်လာတာနဲ့ အပြင်မထွက်နိုင်အောင်၊ အလုပ်တွေရှုပ်နေအောင် ခိုင်းပါတယ်။ စင်ကာပူအစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်ချိန်၊ အိမ်ချိန်၊ အိပ်ခန်း၊ တစ်ပတ်တစ်ရက်အပြင်ထွက်ခွင့်၊ မိတ်ဆွေများနဲ့ဖုန်းပြောဆိုခြင်း… စတဲ့ အိမ်ဖေါ်အခွင့်အရေးများကို မပေးပါဘူး။ စင်ကာပူအိမ်ရှင်များက အိမ်ဖေါ်များအားလပ်နေရင် ယောင်္ကျားလေးမိတ်ဆွေများ သူတို့အိမ်ပေါ်တက်လာမှာ တော်တော်စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ အိမ်ရှင်ဆိုတော့ သူ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ သူခိုင်းသလိုလုပ်ရမယ်၊ အာဏာရှင်လိုလုပ်ချင်တဲ့ အိမ်ရှင်နဲ့တွေ့ရင်၊ အိမ်ဖေါ်အမျိုးသမီး ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ အိမ်ဖေါ်အမျိုးသမီးက ဗဟုသုတ၊ပညာ၊မိတ်ဆွေ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ရှင် အနိုင်မကျင့်ရဲပါဘူး။ ဗဟုသုတ၊ပညာ၊မိတ်ဆွေ မရှိရှာတဲ့ အိမ်ဖေါ်ခမြာ အိမ်ရှင်ရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ခံရင်း နောက်ဆုံး ပြသနာကြီးတွေဖြစ်ရပါတယ်။
တစ်ချို့က ပြောတယ်။ မြန်မာပြည်က ဆင်းရဲသား၊ တောနယ်များက စင်ကာပူရောက်လာတော့၊ လျှပ်စစ်မီးပူ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများ၊ အဝတ်လျော်စက်နဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးပစ္စည်းများ စင်ကာပူရောက်လာမှ တွေ့ရတယ်။ သိရတယ်။ နောက်ဆုံး ကြမ်းတိုက်နည်းတောင် မလုပ်တတ်လို့ … ပြသနာဖြစ်ရတယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ကျမအမြင်မှာတော့ ဒါတွေက ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ပေးလို့ရပါတယ်။ ပညာလုံးဝမတတ်ရင်တောင် စကားနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ရင် မကြာခင်အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ တချို့စင်ကာပူအိမ်ရှင်တွေ မြန်မာအိမ်ဖေါ်ကိုငှားမယ်ဆိုရင် သူတို့ကိုယ်တိုင် မြန်မာစကားပြောသင်ကြတယ်။ စင်ကာပူအိမ်ရှင်အချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စကားပြော၊ အသံထွက် စာအုပ်လေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့၊ ပညာတတ် စင်ကာပူအိမ်ရှင်များကတော့ နဗလိန်း၊ ပညာလုံးဝမတတ်တဲ့ အိမ်ဖေါ်ကိုတောင် လုပ်ချင်လာအောင် ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ အိမ်ဖေါ် အလုပ်လုပ်ချင်လာအောင် လုပ်တတ်တဲ့ အိမ်ရှင်တွေ အများစုဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူမှာက အစိုးရက အိမ်ရှင်တွေကို စည်းကမ်းဥပဒေများနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ အိမ်ရှင်များ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များစွာနဲ့ သင်တန်းများစွာ အိမ်ရှင်များကို အခမဲ့သင်တန်းများပေးကြပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေးမဲ့အိမ်ရှင် စင်ကာပူသတင်းစာတွေမှာ အိမ်စေ ကြော်ငြာတွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အိမ်ဖော်တွေကို ဈေးရောင်းသလို ရှော့ပင်စင်တာတွေမှာ ရောင်းနေကြပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးအိမ်စေ အရမ်းကောင်းတယ် ..လို့ကြေငြာတဲ့ မြန်မာစပယ်ရှယ်လစ်စ် အေးဂျင့်တွေလည်း အများကြီးရှိနေပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်၊ ဘာမှမတတ်တဲ့အိမ်ဖေါ်တွေကိုတောင် စင်ကာပူရောက်မှ အိမ်ဖေါ်သင်တန်းများပေးပါတယ်။ အေးဂျင့်များက သင်တန်းတွေဖွင့်ပေမဲ့ဈေးကြီးလို့ အိမ်ရှင်များက မပို့ချင်ကြပါဘူး။ အခမဲ့အိမ်ဖေါ်သင်တန်းများကတော့ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ရှင်တွေက မလွှတ်ချင်ပါဘူး။ အိမ်ဖေါ်ကပဲ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ့်ဖာသာ သင်တန်းတက်ရသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ပြသနာများရဲ့ အဓိအဖြေကတော့ အိမ်ရှင်က “လူကိုလူလိုဆက်ဆံခြင်း” ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်-အိမ်ဖေါ် ယုံကြည်ခြင်းမှုရဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ရှင်-အိမ်ဖေါ် ပြသနာများမှာ အဓိကအကျဆုံးကအိမ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ဒေါ်အေးမာမာက အိမ်ဖေါ်ပြသနာများရဲ့ အဓိကက အိမ်ရှင်လို့ဆိုပါတယ်။ အိမ်ရှင်ကောင်းလဲ အိမ်ဖေါ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေလဲ ရှိမှာပါ။ အိမ်ဖေါ်ဖက်က လိုအပ်တာတွေ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ဒါကတော့ မြန်မာလိုပြောရရင်၊ ကံဆိုးလို့ပဲပြောရမဲ့ ပြသနာတွေလဲရှိတာပေါ့နော်။ ခုနပြောသွားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ခြင်း၊ အိမ်ဖေါ်ဗဟုသုတမိတ်ဆွေမရှိခြင်း အကြောင်းရင်းတွေအပြင် အခြားပြောမကောင်းတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာအိမ်ဖေါ်တွေ မြန်မာပြည်မှာ တစ်လဒေါ်လာ၁၀၀အလုပ်တောင် ရှာဖို့သိပ်ခက်ပါတယ်။ မြို့ပေါ်က ပညာတတ်သူများအဖို့ မြန်မာပြည်မှာ လစာကျပ်တစ်သိန်း (ကန်ဒေါ်လာတစ်ရာ) ရရင်၊ အိုကေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်အကိုင် အရမ်းရှားပါးတဲ့ နယ်မြို့တွေမှာ တစ်လကျပ်၅သောင်းတောင် မလွယ်ပါဘူး။ စင်ကာပူမှ အရင်းနှီးမလိုပဲ ၈လလုပ်ပြီးရင် တစ်လကို ကျပ်၃သိန်းလောက်ရမယ် ဆွဲဆောင်တာတွေကို၊ ငွေကြေးအခက်ခဲ ကြုံနေရတဲ့ အမျိုးသမီးများ၊ မခံနိုင်ပါဘူး။ အရင်းအနှီးမရှိပဲ၊ စင်ကာပူဆိုတဲ့နိုင်ငံခြားမှာ အိမ်ဖေါ်လာလုပ်ရမယ်။ တောမြို့က အမျိုးသမီးများစွာ မြို့ကြီးတွေဆီ အလုပ်လာရှာနေတဲ့ခေတ်ဖြစ်လို့ ၊ လူပွဲစားလို့ နာမည်တတ်ရမဲ့ အေးဂျင့်တွေရဲ့ ဆွဲဆောင်၊ ဖြားယောင်းမှုကို မငြင်းဆန်နိုင်အောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်က စင်ကာပူဆိုရင် အရမ်းသွားအလုပ်လုပ်ချင်တာကိုး။
အဲဒီလို ငွေလိုချင်လွန်းလို့၊ မိဘလုပ်ကျွေးချင်လွန်းလို့၊ မောင်နှမများကိုပညာသင်၊ကျောင်းထားချင်လွန်းလို့ မိန်းကလေးတွေက မိဘဆွေမျိုးတွေကို ကြည့်ရှုလုပ်ကိုင်ကြွေးမွေးချင်တာကိုး။ နောက်ဆုံး နယ်လှည့်အေးဂျင့်တွေနဲ့တွေ့သွားလို့ စင်ကာပူရောက်လာတာ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် စင်ကာပူရောက်လာတယ်။ တစ်ချို့လည်း စိတ်ညစ်လို့ကြော်ငြာဖတ်ပြီး အေးဂျင့်တွေ ဆီရောက်လာတာတွေ ရှိပါတယ်။
ငွေလိုနေတာကြောင့်လို့ ပြောနိုင်ပေမဲ့၊ မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်ကိုင်ရှားပါးလွန်းလို့၊ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့လည်း လွယ်ကူနေတော့ ဘာမှပြင်ဆင်မှုမရှိပဲ စင်ကာပူကိုရောက်လာတာတွေပဲ များပါတယ်။ အေးဂျင့်က ရုပ်ရည်ကြည်ပျော်မယ်၊ သွက်လက်ချက်ချာပုံရတယ်ဆိုရင် စင်ကာပူက အိမ်ရှင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယို အင်တာဗျူးပြီး အလုပ်ရသွားပါတယ်။ တစ်ချို့ စင်ကာပူအိမ်ရှင်တွေကလည်း ဗွီဒီယိုထဲက ရုပ်ရည်ကြည့်ပြီး၊ ခိုင်းလို့ရမဲ့ပုံစံပဲ ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်လဲ အလုပ်ရသွားပါတယ်။ အလုပ်ရသွားရင် တစ်ပတ်အတွင်း စင်ကာပူကို ရောက်လာပါတော့တယ်။ ပတ်စပို့လုပ်တာလည်း လွယ်တယ်။ တစ်ပတ်ပဲကြာတယ်။ ပုံစံတစ်ဆယ်၊ မှတ်ပုံတင်နဲ့ ငွေ၃သောင်းလောက်ဆို ၁၀ရက်အတွင်း ရတယ်။ အသက်ငယ်နေရင် ပုံစံ၁၀နဲ့ မှတ်ပုံတင် အသစ်လုပ်ပြီး အသက်လိမ်လိုက်တယ်။ အသက်လိမ်ခြင်းကလည်း ပြသနာတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းကြီးတစ်ခုပါပဲ။ စင်ကာပူမှာ အသက်၂၃နှစ်ပြည့်မှ အိမ်ဖေါ်လုပ်ခွင့်ရပေမဲ့ လာဘ်စားမှုများတဲ့ မြန်မာပြည်၊ မှတ်ပုံတင်ဌာနတွေမှာ ဒါနဲ့ပဲ လုပ်စားနေကြတော့ အသက်လိမ်ခြင်းကို တားဖို့ခက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ဖေါ်အလုပ်အတွက် သင်တန်းဖွင့်နိုင်ခြင်း အလွန်အားနည်းပါတယ်။ သင်တန်းတစ်လလောက် စနစ်တကျပေးနိုင်ရင် လုံလောက်ပေမဲ့၊ အများစု အိမ်ဖေါ်များခများ ဖုတ်ပူမီးတိုက် ဘာမှသင်တန်းမရှိပဲ အေးဂျင့်များ စီရင်တဲ့အတိုင်း၊ စင်ကာပူကို မျက်နှာငယ်နဲ့ရောက်လာသူချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူမှာတော့ ပြသနာဖြစ်ရင် အစိုးရကိုကြောက်ပါတယ်။ ချက်ချင်း အိမ်ဖေါ်ကို အိမ်ရှင်၊ အေးဂျင့်တွေ ကျိတ်ပေါင်းပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ပစ်လိုက်ပါတယ်။ မြနမာပြည်အစိုးရက အေးဂျင့်တွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။ လူကုန်ကူးခြင်း (အမျိုးသမီးများကို လိင်အလုပ်သမားအဖြစ် ပြည်ပပို့ခြင်း ပြသနာတောင် မနည်းဖြေရှင်းနေဆဲ ဖြစ်လို့ ၊ အိမ်ဖေါ်ပြသနာဖြစ်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ အိမ်ဖေါ်ကလည်း ငွေလုံးဝမရှိတဲ့ အနိုမ့်ဆုံးလူတန်းစားဖြစ်လို့ ငွေ၊ အာဏာရှိတဲ့ အေးဂျင့်တွေက အမြဲနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ မြန်မာပြည်မှာ မှန်မှန်ကန်ကန်အေးဂျင့်တွေ၊ အိမ်ဖေါ်ပြသနာဖြေရှင်းပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေပါပြီ။
ဒါကြောင့် အိမ်ဖေါ်များအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တစ်လလောက်သင်တန်းပေးရပါမယ်။ စင်ကာပူရောက်ပြီးလဲ သင်တန်းဆက်လက်ပေးရပါမယ်။ သင်တန်းကို အကျိုးရှိစွာလုပ်နိုင်ဖို့ စင်ကာပူ၊ မြန်မာအစိုးရ၂ဖက်စလုံး ဥပဒေနဲ့ အေးဂျင်စီတွေကို ပြဌာန်းထားရပါမယ်။
မေး။ ဒါနဲ့၊ လောလောဆယ် ဒေါ်အေးမာမာတို့၊ ကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမှုတွေကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ။ စင်ကာပူက HOME Office နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။ လိပ်စာကတော့ HOME ACADEMY, HEAD OFFICE Blk 261 Waterloo Street #04-36 Singapore 180261 Tel 63371171 migrants.home@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်။ ပြသနာဖြစ်နေတဲ့ အိမ်ဖေါ် မြန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှား စတဲ့ မိန်းကလေးများကို စောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။ တရားရုံးအမှုကာအတွင်းမှာ ပြသနာဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို နေစရာ၊ အလုပ်၊ သင်တန်းတွေ ပေးထားပါတယ်။ တရားရုံးအမှုဖြစ်သွားရင် တခါတခါ နှစ်နဲ့ချီပြီး ကြာသွားတတ်ပါတယ်။ အခုပြသနာများကတော့ အဲဒီ HOME OFFICE မှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာ အိမ်ဖေါ်မိန်းကလေးများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ဖေ့စ်ဘုတ်တွေမှာ ကြည့်လို့ကြပါတယ်။
(ဖေ့စ်ဘုတ် Helping Hands & Kitty Aye Mar Mar များမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်)။
– Helping Hands, Case no. No. 06 မသန်းသန်းဝင်း (Date : 26 May 2014)
ဓါတ်လှေခါးထဲမှာဘလက်ကာယပြုကျင်ရန်ကြိုးစားမှုပါ. ဓါတ်လှေခါးထဲမှာဖွင့်မရအောင်ပိတ်ပြီးနမ်းပါတယ်. တံခါးပွင့်သွားတော့သူကို့ချုပ်နှောင်ပြီးလှေခါးဆီကိုဆွဲခေါ်စဉ် ရုံးကန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး အိမ်ကိုရောက်အိမ်ရှင်ကိုငိုယိုပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုပြောပြပါတယ်.အိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရဲကိုတိုင်လိုက်ပါတယ် (ဒီလိုကောင်းတဲ့အိမ်ရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်)
– Helping Hands, Case no. No. 07 (Date : 30 May 2014)
အိမ်ဖေါ်လူမဆန်အောင်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ပြီး၊ ကလေးမလေးကိုကြိမ်ဖန်များစွာ ပါးရိုက်ခြင်း၊ အန်ဖတ်ပြန်စားခိုင်းခြင်း၊ oral sex ပြုရန်အဓမ္မခိုင်းစေခြင်း၊ ဘလက်ကာယ ပြုလုပ်ခံရခြင်းစသည်တို့ပါ။ အမှုပေါင်း ၃၂ခုနဲ့ စင်ကာပူအစိုးရက အိမ်ရှင်လင်မယားကို တရားစွဲထားပါတယ်။ …သမီးငွေရှာချင်သေးပါတယ်အန်တီရယ်. အခုလည်းသမီးကို နောက်ထပ်အိမ်ရှင်ရှာပေးပါ.. သမီးကို ပါးရိုက်လည်း ခံပါမယ်.. သမီးအခုထိအိမ်ကို တပြားမှမပို့ရသေးတာပါ.. သမီးအဖေက ဒီအကြောင်းတွေသိယင် စိတ်ကောင်းမှမဟုတ်ဘူး၊ ဘလက်ကာယ လုပ်ခံပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာ ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်လား.. ငါငွေမရှာနိုင်တော့ဘူး. အကြီးမားဆုံးပူပန်စိုးရိမ်မှုနဲ့ သေလည်းသေပါစေ မထူးတော့ဘူး ငါပြေးတော့မယ်ဆိုပြီးသူတို့နေတဲ့ ၇ ထပ် ဝရန်တာကနေ ဟိုဘက်အခန်းကိုကူးသွားပါတယ်. ကျယင်တော့သေပြီပေါ့လေ. အိမ်နီးနားချင်းကိုတတ်သလောက်ပြောပြီး help help ဆိုတော့ အဲဒိအိမ်ရှင်တွေက ရဲကိုဖုံးဆက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ သတင်းစာမှာ ဟိုးလေးတကြော် ပါလာပြီး၊ စာနာကြပါတယ်။ ကလေးမ အတွက်၊ အလှုရှင်များစွာပေးလှုငွေကြပါတယ်။
– Helping Hands, Case no. No. 08 မထက်ထက်အောင် (Date :4June 2014, 11:00PM)
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ၅ထပ်ကခုန်ချပြီး ဆေးရုံရောက်သွားခြင်း။ ကွန်ဒိုတစ်ခုမှာ၊ အိမ်ရှင်မိန်းမနှင့်သူ့အဒေါ်က ဘယ်လိုကြိုးစားလုပ်လုပ် စိတ်တိုင်းမကျ ဆူပူပြောဆိုတဲ့ ဒဏ်တွေကို မခံနိုင်လို့ ၅လွှာမှခုန်ချမှုပါ။ အိမ်ရှင်မ ၂၅နှစ်, အိမ်ွရှင်ယောက်ကျား အသက်၃၀, ၄လ အရွယ်သားလေးနဲ့နေပါတယ်။ ရောက်တတည်းက စိတ်ညစ်ပြီး လအနည်းငယ်ကြာတော့၊ တနေ့မှာတော့ (16 May 2014) အိမ်ရဲ့ ဝရမ်တာမှာရပ်ုပီး စိတ်ထဲမှာ ဘာဖြစ်မှန်းမသိခုန်ချမိပါတယ်။ သမီးရဲ့ညာခြေ ဒူးအောက်ပိုင်းအရိုးကြိုးသွားပြီးသံချောင်းနဲ့အစားထိုးပါမယ်. ဘယ်ခြေဖဝါး အသားတွေ ကြေမွသွားပြီး ပေါင်ကအသားနဲ့အစားထိုးထားပါတယ်၊ မူလပကတိအတိုင်းပြန်ရဘို့တော့မသေချာဘူးလို့ပြောပြပါတယ်၊ခါးရိုးကြိုးသွားပြီး မူလီနဲု့ပြန်ဆက်ဘို့ မနက်ဖန်မှာ Op လုပ်ပါမယ်။ အိမ်ရှင်ယောင်္ကျား ၃ကြိမ်လာကြည့်ပါတယ်။ သမီးနေကောင်းသွားယင်တော့ အလုပ်တွေလုပ်ပြီး သမီးမိသားစုအတွက် ထောက်ပံ့ချင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ သနားစရာ သမီးငယ်အတွက် အလှုရှင်များက စုစုပေါင်း $1800 လျုဒါန်းထားပါသည်. ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်အတူသာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
Helping Hands Case no. No. 10 (Date : 17 June 2014, 11:45PM)
အိမ်ဖေါ်၇လလုပ်ပြီး၊ လုပ်ခတစ်ပြားမှမရပဲမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခံရခြင်း။ မနက် နေ့လည် ညနေ ထမင်းအနည်းငယ်ကို၊ ဟင်းမပါပဲစားရတာခြင်း၊ အင်းဆက်တွေသတ်တဲ့ဆေးရည်ဗူးကိုပါးစပ်ထဲ အတင်းထိုးထဲ့ခြင်း၊ စည်းကမ်းကိုဖေါက်ဖျက်ပါက မနက်၅နာရီထပြီး ဧည့်ခန်းမှာအခေါက် တစ်ရာပြေးရတယ်လိ့ဆိုပါတယ်။ နှိပ်စက်မှုကလည်းပုံစံမျိုးစုံပါ။ ဒဏ်ပေးတာတွေက တင်ပါးလှန်ုပြီးကြိမ်လုံး၊ သံလုံးနဲ့လည်းရိုက်ပါတယ်။ ဆံပင်ဆောင့်ဆွဲပြီး ကြမ်းပြင်နဲ့ဆောင့်ပါတယ်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး ရင်ဘက်အပေါ်မှာ သူခြေထောက်နဲ့ဖိထားပြီး. လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မျက်လုံးနားတဝိုက်ကိုဖိနှိပ်တာပါ။ အစာအဟာရလည်းပြတ်လပ် စိတ်ဆင်းရဲခြင်းများကို ခံစားရပေါင်းများလာတဲ့အခါ မိန်းကလေးတို့ ဓမ္မတာ လာခြင်းရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်. စလုံးရောက်ရောက်ခြင်းလမှာပဲ ပေါ်ပြီး ၉လကြာပျောက်သွားပါတယ်။ ၁၀လ အလုပ်လုပ်ထားပြီး အေးဂျင့်ကြေး ၇လစာပေးရမှာပါ. လက်ထဲကို တပြားတချပ်မှ မရောက်တာပါအမရယ် တဲ့။ ၁၀လအကြာ မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခံရပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာယောင်ချာချာနဲ့ဘယ်သွားရမှန်းမသိ အိမ်လည်မပြန်ချင်ဖြစ်နေစဉ် ကူညီတတ်သော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီး အဲဒီ အမက အင်းစိန်က အေးဂျင့်တဦး ဦး.xx အိမ်ကိုသွားကြပါတယ်။ အကြောင်းစုံလည်းနားထောင် ဒဏ်ရာတွေလည်းတွေ့ပြီးတဲ့အခါ စင်ကာပူအစိုးရ MOM လည်းဖုံးခေါ် စလုံးက agent ဆီလည်းဖုံးခေါ်ပြီး စင်္ကပူကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်ကိုတရားစွဲထားပါတယ်။
မြန်မာအိမ်ဖော်တစ်ဦး သူပြုစုထိန်းရတဲ့ အဖွားကြီးတစ်ဦးကို သတ်မှုနဲ့ တရားစွဲခံထားမှုလဲ တွေ့ဆုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ဖော်များဖက်က လွန်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အိမ်ဖော်များကို ဘာသာတရားနဲ့၊ ဘုရားအဆုံးအမများနဲ့ ကျင့်ကြံ၊နားထောင်၊ ဖတ်ရှုဆင်ချင်နေထိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများအတွက် ပန်ကြားချက်။ 10 June 2014
စင်္ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားရေးရာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများသိရှိရန်. ။ စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံရုံးမှာလည်း မြန်မာ အလုပ်သမား လေးများ အထူးသဖြင့် အိမ်အကူအမျိုးသမီးလေးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်များကိုသက်ဆိုင်ရာဌာန အစိုးရသို့ အမှန်အတိုင်း မထိန်မချန် တင်ပြသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ မိမိတို့၏ လက်ရှိဥပဒေများအား ပြန်လည်စိစစ်ပြီး ပို၍းမှန်ကန်သော နည်းစနစ်များကို ချမှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်၊ တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေ အရ မတတ်သာ၍ပြင်ပသို့ ထွက်လုပ်ရသော မိမိ၏နိုင်ငံသားများ အဆင်ပြေစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လက်ရှိအစိုးရ၏ ပံပိုးသူညီမှုများ လိုအပ်လှပါသည် ၊ ပင်မထွက်ရှိရာနိုင်ငံသည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအစိုးရနှင့် အေးဂျင့်များ၏ သမာသမတ်ကျသော စနစ်ကျသော လုပ်ဆောင်မှုများ အထူးလိုအပ်လှပါသည်၊
မြန်မာဘက်မှ စနစ်ကျစွာမလုပ်ဆောင်သမျှ ညှင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရမှု , မတရားစေခိုင်းမှု, ကာမဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခံရမှု၊ လူသတ်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှု စသည်တို့ အစဉ်ပေါ်ပေါက်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဖြစ်စဉ်များမှ အောက်ပါအချက်များကိုမြန်မာဘက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
၁) အစိုးရ(မြန်မာ) ထံတွင် မှတ်ပုံတင် လုပ်မထားသော အေးဂျင့်များ ပြတ်သားစွာအရေးယူပေးပါရန်. ပြသာနာဖြစ်တိုင်း ထိုအေးဂျင့်ကိုလိုက်လျှင်ရုံးတံခါးပိတ်၍ပြေးကြပါသည်။
၂) အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ချက်ကို သေချာစစ်ဆေးပြီးမှလွှတ်ပါရန်. ယခုတလောဖြစ်ခဲ့သော့ ဖြစ်စဉ်များတွင်အသက်၂၀အောက် မိန်းကလေးများဖြစ်ပါသည်၊ တချိုမှာ ကလေးသာသာ မျှသာဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရန်ရင့်ကျက်မှု မရှိသေးပါ။
၃) ပညာအရည်အချင်အား သတ်မှတ်စစ်ဆေးပေးပါရန်။ မြန်မာမှ ပထမ တန်းနှင့်ထွက်လာပြီး ကလေးထိန်းနေသော ကလေးမလေးသည် မည်ကဲ့သို့ ကောင်းစွာ ထိန်းကျောင်းနိုင်ပါမည်နည်း။
၄) အေးဂျင့်ဖိုးငွေ၊ (Agents Fees) ပွဲစားခ ၈လစာ, အိမ်အဆင်မပြေ၍အိမ်အသစ်ရှာပေးခ (Transfer Fees) ကို ပွဲစားခ ၂လ သို့ ၃လစာ ယူထားခြင်းသည် အလွန်များလှပါသည်၊ အစိုးရမှ သင့်တော်သော ဈေးနှုန်းအားဥပဒေဖြင့် သတ်မှတ်ပေးပါရန်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း (Grace Period) ကလေးမလေး ဘက်မှ အမှားမဟုတ်ပဲ အလုပ်ပြောင်းလိုလျှင် အေးဂျင့်ကြေးမယူရန်။
၅) စကားပြောနှင့် အိမ်တွင်းမှုသငိတန်း များအားသေချာ ပို့ချပေးပါရန်နှင့် (Skill Worker) ကျွမ်းကျင်လုပ်သားစစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့ နှစ်ဖက်အစိုးရမှ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာမှမထွက်ခွါမီ လုပ်ဆောင်ပေးပါရန်။
၆) မီမိသွားလုပ်ရမည့် နိုင်ငံအခြေအနေ။ ထိုနိုင်ငံ၏ လူနေမှုစနစ်တ်ို့ကို ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောပြပေးပါရန်။
၇) အခက်အခဲဖြစ်လာလျှင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်၊ မည်သူကိုအကူညီတောင်းရမည်ကို ဆက်သွယ်ရန်ဖုံးနံပါတ်များကိုမထွက်ခွါမှီ၊ ကြိုတင်ပေးထားပါရေန်။
၈) စင်ကာပူအခြမ်းမှအေးဂျင့်က ရောက်စ၆လ အတွင်း ကလေးမလေးအား ဆက်သွယ်ပြီး အခြေအနေကို စုံစမ်းမေးမြန်းပေးပါရန် အထက်ပါ အချက်များအား အစိုးရနှင့် အေးဂျင့်မှကူညီ လုပ်ဆောင် ပေးပါလျှင် အခက်အခဲနှင့် ပြသာနာဖြစ်မှုများ လျှော့ပါးပြီး တိုင်းပြည်၏ ဂုဏ်လည်း မထိခိုက် အားလုံးလည်း စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် လုပ်ကိုင် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ခြင်းကြားနှင့်ဖါးကောက် ဆိုသကဲ့သို့ ပြသာနာများ အစဉ်ဖြစ်နေပြီး လူမျိုးဂုဏ် တိုင်းပြည်၏ ဂုဏ်တို့အား လည်းထိခိုက်စေပါသည်။ မြန်မာသံရုံးမှလည်းအထက်ပါ အခြေအနေအားမြင်တွေ့ဖတ်ရှုပြီး သက်ဆိုင်ရာသို့ ကူညီကာပို့ဆောင်နိုင်ပါစေ။ အယင်နှစ်ပြဿနာများကု ဆန်းစစ်ပြီး၊ ဆောင်သင့်၊ရှောင်သင့်သည့် အချက်များကို အကြောင်းကြားပေးသူများအား ကျေးဇူတင်ရှိပါသည်။
စေတနာမှန်စွာဖြင့် မိမ်ိနိုင်ငံ၏ သမီးငယ်များကို ဝိုင်းဝန်ကူညီကြပါစို့။
==========================ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ သတ္တမနေ့ အစီအစဉ် [ ၉ – ၆ – ၂၀၁၄ ] (တနင်္လာနေ့) Eleven Media
ဦးသိန်းညွန့်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်က ” အိမ်အကူ၊ အိမ်ဖော်အလုပ်သမားများ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား(၃)သန်းခန့်သည် နိုင်ငံခြားတွင် သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။ မိမိ၏ ကာယအား၊ ဥာဏအားကို အသုံးပြု၍ လုပ်ကိုင်၍ ရရှိသော လုပ်ခဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေရသော နိုင်ငံသားတချို့မှာ ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းခံရမှု၊ လုပ်ခလစာအခွင့်အရေး တန်းတူရည်တူမရမှု စသည့်ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုများ ခံနေရကြောင်း သတင်းများ ကြားသိရပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)ပုဒ်မ ၃၈၀ ၌ ” နိုင်ငံခြား တိုင်းတစ်ပါးနှင့် ဆက်ဆံသော နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ပြည်တွင်း၌ ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပ၌ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို တောင်းခံခွင့်ရှိသည်။ ” ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အထမြောက်စေရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းပါ အပိုဒ် ၂၃ အရ တရားမျှတ၍ အဆင်ပြေမှုရှိသော လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေများ၊ ရပိုင်ခွင့်၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ထိုက်တန်သော ဘဝရပ်တည်မှုကို အာမခံနိုင်မည့် အခကြေးငွေများ၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် လူမှုရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ နိုင်ငံဖြတ်ကူး သွားရောက်နေသော အိမ်ဖော်၊ အိမ်အကူများ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားများအတွက် ဘဝလုံခြုံမှုကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော နိုင်ငံခြားရောက် အလုပ်သမားများဆိုင်ရာ အထူးဥပဒေတစ်ရပ် အလျင်အမြန် ပြဋ္ဌာန်းပေးပါရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အား ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အလေးအနက် တိုက်တွန်းကြောင်း ” အဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း၊
မှတ်ချက်။ ဦးသိန်းညွန့်အဆိုကို လွှတ်တော်က စိတ်မဝင်စား၊ မဲအများစုဖြင့် ပလပ်လိုက်သည်။ (ရွှေ့ဆိုင်းထားရန်၊ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ KIV , Pending)
အသက်မပြည့်ပဲစင်ကာပူတွင် အိမ်ဖော်လုပ်ခြင်း 17 June 2014 THE VOICE
၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို အုပ်ထိန်းသူများထံ ပြန်အပ်။ ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၄
စင်ကာပူတွင် အသက်၂၃နှစ်ပြည့်မှ အိမ်ဖော်လုပ်ခွင့်ပေးပါသည်။ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင် အလယ်ရပ်ကွက်ရှိ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီ တစ်ခုတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ အိမ်ဖော်အလုပ် သွားရောက် လုပ်ကိုင်မည့် ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေမြို့နယ် ဒေသမှ အသက် ၁၆ အရွယ် မိန်းကလေး နှစ်ဦးကို ၎င်းတို့၏ အုပ်ထိန်းသူများထံ ပြန်လည်အပ်နှံမည် ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့ အစည်းမှ အမျိုးသမီး ရေးရာ ဌာန တာဝန်ခံ ဒေါ်နီလာသိန်းက ပြောကြားသည်။ ၁၀ တန်းကျပြီး မိဘတွေကလည်း စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့ အေဂျင်စီနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အကြွေးစနစ်နဲ့ စင်ကာပူမှာ အိမ်ဖော်အလုပ် သွားလုပ်မှာ ဟုဆိုသည်။ သတင်းပေးချက်အရ ရဲအဖွဲ့နှင့် အေးဂျင့်သင်တန်းတွင် သွားရောက်စစ်ဆေးရာ၊ စင်ကာပူသို့ အိမ်ဖော်စေလွှတ်မည့် ရှမ်းပြည်နယ် ၁၃ဦး။ ဧရာဝတီတိုင်း ၄ဦး တို့တွင် ၁၈နှစ်မပြည့်သူ ၃ဦးပါသည်။ ဗဟန်းမြို့မ ရဲစခန်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
စင်ကာပူဥပဒေအရာ အသက်၂၃နှစ်ဖြစ်အောင် မြန်မာမှတ်ပုံတင်နဲ့ပုံစံ(၁၀) ၂ခုကို ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါတွေ အလွယ်တကူ လုပ်နေကြပါတယ်။ အတုလားမသိပါ။ ဘောင်ဝင်အောင်လုပ်ပြီးရင် မြန်မာပတ်စပို့ ၁၀ရက်အတွင်း ထုတ်ပေးပါတယ်။ မြန်မာပတ်စပို့ရုံးက ဒီအချက်လက် (မှတ်ပုံတင်နဲ့ပုံစံ၁၀) မှန်ကန်ကြောင်း အချိန်ကုန်ခံပြီး မစစ်ဆေးပါဘူး။ ပြသနာဖြစ်မှပဲ စစ်ဆေးတော့ အတုဖြစ်နေရင်၊ အသက်လိမ်တဲ့ မိန်းကလေးပဲ အတုလုပ်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်စပို့ အသက်မှန်၊ မမှန် စစ်ဆေးတဲ့ အဖွဲ့ အစိုးရမလုပ်ပေးနိုင်လဲ၊ ပြင်ပအစည်းတစ်ခု လုပ်ပေးဖို့၊ မြန်မာပြည်မှာ လိုအပ်နေပါတယ်။
အထက်ပါအချက်များမှာ ဖေ့ဘုတ်တွင် ဖေါ်ပြထားပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ စေတနာဖြင့်ကူညီပြောဆို၊ တင်ပြပေးသူများ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ စင်ကာပူများတွင် ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်လှပါသည်။
စကားဝိုင်းနောက်ဆုံးမေးခွန်း ၂ ခု
မေး။ စင်ကာပူအစိုးရက အိမ်ရှင်များကို ဥပေဒေထုတ်ပြန်ပြီး၊ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီဥပဒေအကြောင်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ။ ဒီဥပဒေကို အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်မှာ အလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဦးအေးငြိမ်း မြန်မာများနားလည်လွယ်အောင် ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ Work Permit လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးက အသက်၂၃နှစ်ပြည့်ရမယ်၊ ဆေးစစ်ခြင်း (HIV မရှိ၊ ရောဂါမရ) အောင်ရပါမယ်၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် ပြန်ရမယ် ..ဆိုတာပဲ အဓိကရေးထားပါတယ်။ ပညာအရည်ချင်း ရှိစရာမလိုပါဘူး။ ဥပဒေကတော့ အိမ်ရှင်များအတွက် ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ အေးဂျင့်များက အိမ်ရှင်များကို သင်ပြ၊ ပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့၊ လူကိုလူလို အလုပ်ခိုင်းတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး (အိမ်ဖော်အခွင့်အရေး) ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၁ပတ်ကို တစ်ရက် အပြင်ထွက်ခွင့် ပေးရမယ်။ အပြင်ရင်လဲ အလုပ်မခိုင်းရဘူး။ ခိုင်းရင် သတ်မှတ်တဲ့ အချိန်ပိုပေးရမယ်။ လစာကိုလည်း အိမ်ရှင်၊အိမ်ဖော် စာချုပ်မှာ အတိုအလင်းရေးရပါတယ်။ အခြေခံလစာ၊အချိန်ပိုကြေး၊ ဆုကြေး၊ ဆေးစစ်စရိတ်၊ အသွားအပြန်စရိတ် ..အားလုံးကို အိမ်ရှင်က ကျခံပေးရပါမယ်။ အစိုးရကိုလဲ အိမ်ရှင်က လဲဗီးလို့ခေါ်တဲ့ တစ်လ ၂၆၅ဒေါ်လာ အခွန်ပေးရပါတယ်။ ကလေးငယ်၊မသန်မစွမ်းများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့တော့ တစ်လ ဒေါ်လာ၁၂၀ လျော့ဈေးအခွန်ပေးရပါတယ်။ လိင်ပြသနာမဖြစ်ဖို့ အိမ်သားများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ထိတွေ့နှိပ်နယ်တဲ့အလုပ် မခိုင်းရပါဘူး။ တကယ်တော့ ဒါတွေကို အိမ်ဖော်လုပ်သူများ မသိတာများပါတယ်။ အေးဂျင့်ကောင်းကောင်း ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည် မြို့နယ်အေးဂျင့်များက ဆွဲဆောင်စဉ်၊ အိမ်ဖော်လုပ်မဲ့သူလဲ အခွင့်အရေးလဲမသိချင်၊ စင်ကာပူပဲ အမြန်ဆုံးရောက်ချင်နေတော့ အေးဂျင့်များရဲ့ပြုသမျှ နုရပါတယ်။ စင်ကာပူရောက်တော့လဲ အိမ်ရှင်များပြုသမျှ နုရပြန်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပြသနာများ မဖြစ်သင့်ပဲ ဖြစ်လာရပါတယ်။
ပြသနာများဖြစ်လာရင်၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာရင် .. အိမ်ရှင်ကတာဝန်ယူရပါတယ်။ ဆေးခန်းစရိတ်ကို အိမ်ရှင်က အကုန်ကျခံရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအာမခံအရ S$15,000 ဒေါ်လာတစ်သောင်းခွဲထိ အာမခံကုမ္ပဏီဆီက ရနိုင်ပေမဲ့၊ အိမ်ရှင်၊အေးဂျင့်များပေါင်းပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ပို့လိုက်ရင် ခံစားခွင့်မရှိဖြစ်သွားရပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပြသနာဖြစ်လို့ တရားရုံးအမှုဖြစ်ရင် အိမ်ရှင်၊ အိမ်ဖော်များ ပြစ်ဒဏ်များကျခံရပါတယ်။ အမှုဖြစ်ရင် ထုံးစံအတိုင်း တရားရုံးချိန်းမှုများနဲ့ တခါတရံ နှစ်နဲ့ချီကြာသွားပါတယ်။ အိမ်ဖော်ကတော့ စင်ကာပူက ခိုလှုံနေရာ Shelter တစ်ခုမှာ နေထိုင်၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပါတယ်။
အပြစ်ဒဏ်များကိုလည်း ရေးထားပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နာကျင်စေခြင်း – ထောင် ၁ နှစ် နှင့်/သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေ စင်းဒေါ်လာ ၁၅၀၀။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အလွန်ပြင်းထန်စွာ နာကျင်စေခြင်း – ထောင် ၇ နှစ်၊ ကျူးလွန်သူများအား ကြိမ်ဒဏ် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် ချမှတ်မည်။ လိင်ကိစ္စမြူဆွယ်ခြင်း – ထောင် ၁ နှစ် နှင့်/သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် ။ ဗလက်ကာယပြုခြင်း၊ ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်မှ ၁၀ နှစ် နှင့်/သို့မဟုတ် ၁၂ ချက်ထက် မနည်းသော ကြိမ်ဒဏ် တို့ကို စင်ကာပူရာဇဝတ်ဥပဒေအတိုင်း ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူမှာ နေထိုင်ခွင့်ရပြိး၊ အိမ်ဖော်မဟုတ်ပဲ အိမ်၊ရုံး၊ သန့်ရှင်းရေးအလုပ်များအတွက် နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီးများစွာ အိမ်ဖော်ပါမစ်နဲ့ တရားမဝင် ရောက်လာကြပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ၃၀၀၀လောက် ပွဲစားကိုပေးရပါတယ်။ ဒီလိုတရားမ၀င် ခန့်ထားသူများကို ဖမ်းခံရရင်၊ အိမ်ရှင်ကို ငွေဒဏ် စင်းဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ထိ တပ်ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း သေချာသူရင် အိမ်ဖေါ်ခေါ်ခွင့် တစ်သက်တာပိတ်ပါမယ်။ ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ငွေတက်မက်တဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများဟာ လိင်အလုပ်သမများကို အိမ်ဖေါ်ပါမစ်နဲ့ ခေါ်လာကြပါတယ်။ ဒါမျိုးဆိုရင် ထောင်ဒဏ်၎နှစ်ကနေကြိမ်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်ဥပဒေများရှိပါသေးတယ်။
အိမ်ဖော်မတရားမှုများကို စင်ကာပူအလုပ်သမားရုံး MOM ဖုံးနံပါတ် 6438 5122 ကို တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။
မူရင်းဥပဒေ MOM website အင်္ဂလိပ်လို ၄၃ မျက်နှာရှိပါတယ်။ ဆရာဦးအေးငြိမ်း မြန်မာလို နားလည်လွယ်အောင် ဘာသာပြန်ချက်ထားပါတယ်။ ဝက်ဆိုဒ်မှာ အလွယ်တကူ ရှာဖွေ၊ ဒေါင်းလုပ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဂူဂယ်မှာလဲရှာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်လွှတ်တော်ကတော့ ပြသနာများလွန်းလို့ အနိုမ့်ဆုံးအဆင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပအိမ်ဖော်များဥပဒေ မရှိသေးပါဘူး။
မေး။ ဒေါ်အေးမာမာ တို့ရဲ့ Helping Hand အဖွဲ့က အိမ်ရှင်၊ အိမ်ဖော်များကိုလဲ ကူညီတယ်ဆိုတော့၊ မြန်မာအိမ်ဖော်များ အတွက်ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေ ရှိပါသလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ။ Helping Hand အဖွဲ့က မြန်မာအိမ်ဖော်များပဲမဟုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ သီရိလင်္ကာ၊ တရုပ်၊ အိန္နိယ စသဖြင့် အခြားနိုင်ငံများက အိမ်ဖော်များကိုလဲ ကူညီနေပါတယ်။ မြန်မာအိမ်ဖော်ပြသနာကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရော၊ စင်ကာပူမှာပါ တကယ်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေသူ များစွာရှိပါတယ်။ ငွေအားဖြင့်လည်း ပံ့ပိုးကူညီမှုများရရှိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာတော့ အိမ်ဖော်များအတွက် သင်တန်းတွေရှိပေမဲ့၊ အိမ်ဖော်က ငွေအကုန်ခံရမှာဆိုရင်၊ တက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူ။ ရောက်လာကာစ မြန်မာအိမ်ဖော်များအတွက်
– အိမ်ဖေါ်များ အချိန်မရွေး ဖုန်းခေါ်နိုင်တဲ့ စနစ်ခု လုပ်ဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဖုန်းဖြင့်အကူညီတောင်းမှုတွေကို၊ လုပ်အားပေးများရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းများနဲ့ ဖြေကြားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်အားပေးတစ်ယောက်၊ တစ်ပတ်တစ်ရက် ၂၄နာရီ ဖြေကြားပါမယ်။ သင်တန်းကိုလဲ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြစ်စေ၊ အခမဲ့ဖြစ်စေ ပို့ချပါမယ်။
– တယ်လီဖုန်းပြောခွင့်မရှိတဲ့ အိမ်ဖော်တွေကို Helping Hand အဖွဲ့နဲ့ စင်ကာပူအစိုးရ ညှိနှိုင်းပြီး NGO ပုံစံနဲ့ ကူညီပေဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာအိမ်ဖေါ်အသစ်များ ရောက်ရင် သိနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်။ အိမ်ဖေါ်အသစ်တွေကို အိမ်ရှင်များထံဆက်သွယ်ပြီး၊ အခြေအနေစုံစမ်းမယ်၊ သင်တန်းလဲ ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
– မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့၊ အေးဂျင့်များများကို စုပေါင်းထားတဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြင့် အိမ်ဖေါ်များကိုကူညီလိုပါတယ်။ လက်ရှိလည်း စေတနာရှင်များက လုပ်ကိုင်ပေးပြီး၊ မြန်မာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအထိ ပြောဆိုပြီးသော်လည်း၊ ဥပဒေမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ကြိုးစားရပါဦးမယ်။ အသက် ၂၃နှစ် မပြည့်တဲ့ မိန်းကလေး၊ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဝမတတ်သော မိန်းကလေးကိစ္စ သင်တန်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
– စင်ကာပူတွင် ၂၀၁၃ စာရင်းအရ အိမ်ဖော် ၂သိန်း၁သောင်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာဦးရေ ၃သောင်းခန့် ရှိပါတယ်။ မြန်မာအိမ်ဖော်များကို အေးဂျင်ခ ၇လစာ အခမဲ့လုပ်ပေးရခြင်း နှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းများ နည်းပါးဖို့ အိမ်ဖော်များကို သင်တန်းပေးရပါမယ်။ မြန်မာလူမှု၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ အိမ်ဖော်များ ထိတွေ့မှုရှိမှ အိမ်ရှင်အနိုင်ကျင့်မှု နည်းပါးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ မြန်မာအိမ်ဖော်များအတွက် အေးဂျင့်စုပေါင်းထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခု ရှိဖို့အတွက် မြန်မာသံရုံးမှကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ပါ။
– ကူညီလုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့များစွာရှိပါတယ်။ ဘာသာရေးအဖွဲ့များ၊ ဥပမာ ဓါတ်တော်ကျောင်းတိုက်။ Helping Hands ဒေါက်တာသိန်းသန်းဝင်း၊ ဒေါ်အေးမာမာ၊ ဦးတင်မောင်ဝင်း စတဲ့ မြန်မာ့လူမှုရေးဆောင်ရွက်နေသူများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၃က စင်ကာပူလာရောက်စဉ် မြန်မာကလပ်က စုစည်းပေးထားတဲ့ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၅၀ကျော်ရှိပါတယ်။ အားလုံးကလည်း အိမ်ဖော်များကိစ္စ ကူညီ၊လုပ်အားပေး နေကြပါတယ်။
နိုင်ငံခြားအိမ်ဖော်ကို စင်ကာပူအစိုးရက FDW “Foreign Domestic Worker” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အိမ်ဖော်လုပ်သူကို စင်ကာပူလူမျိုးတွေက အင်္ဂလိပ်လို လွယ်လွယ်ပဲ မိတ် Maid လို့ခေါ်ပေမဲ့၊ စာနဲ့ရေးရင် ယဉ်ကျေးအောင် Domestic Worker လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာအချင်ချင်း အလုပ်အကိုင်မေးရင်၊ ဝပ်ပါမစ်လား၊ အက်စ်ပတ်စ်လားလို့မေးပါတယ် (Work Permit , S-pass)။ ဘယ်မှာလုပ်သလဲ မေးရင်တော့ အိမ်ဖော်လုပ်ကိုင်သူများက အိမ်မှာလုပ်ပါတယ် လို့ဖြေပါတယ်။ နင်က အိမ်ဖော်လုပ်သလား လို့ မမေးသင့်ပါဘူး။ လူကိုလူလိုသိတတ်စွာ မေးရပါတယ်။ သူလဲ မလုပ်ချင်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကြောင့် ဒီအလုပ် လာလုပ်ရပါတယ်။ ကြိုးစား၊ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်ရင်း အိမ်ရှင်နဲ့အဆင်ပြေပြီး၊ နောက်ဆုံး စင်ကာပူမှာပဲ အက်စ်ပတ်၊ ပီအာ၊ စီတီဇင် (S-pass, PR, Citizen) ဖြစ်သွားကြသူ အိမ်ဖော် အမြောက်အများရှိပါတယ်။ ယောင်္ကျားကောင်း ရရှိသွားတဲ့ စိတ်ဓါတ်မြင့်မြတ်သူ အိမ်ဖော်များစွာရှိပါတယ်။ သဘောကောင်းတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အိမ်ဖော်မကို လက်ထပ်ယူလိုက်တဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာဘွဲ့ရပညာတတ်များစွာ စင်ကာပူမှာရှိနေပါတယ်။ စင်ကာပူကို အိမ်ဖော်လာလုပ်ပြီး၊ နောက်ဆုံး စင်ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ် ခံယူသွားတယ်။ လုပ်ငန်းရှင် သူဌေးမ၊ အိမ်ထောင်ရှင်မ ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးအမြောက်အများ ရှိကြပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးကတော့ အထူးသဖြင့် ရောက်ခါစအိမ်ဖော်အသစ်များကို အားပေး၊ ကူညီမှုကြဖို့ပါပဲ။ ပြသနာဖြစ်လာမှ လက်ညိုးထိုးတာ လူပိန်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရပါမယ်။ မြန်မာတွေက စုပေါင်းလုပ်တတ်တဲ့ အလေ့ကျင့်တွေ တိုးတက်လာပါပြီ။ လုပ်အားပေးသူ များစွာရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာများ၊ စုစည်းပြီး ထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်အားပေးများကို စုစည်းပေးဖို့အာဏာပိုင်များက ပံ့ပိုးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ စင်ကာပူအစိုးရ၊ စင်ကာပူက Helping Hand လိုအဖွဲ့မျိုးများနဲ့ အမြဲတမ်းဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်မဲ့ မြန်မာလူမျိုးများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိတ်ဟတ် Michael H. Hart ရေးပြီး၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ဘာသာပြန် ကျော်စွာ၁၀၀ စာအုပ်မှာ ဂရုနာရှင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသမား အိန္နိယက မဟတ္တမဂန္ဒီကြီး၊ သူတော်စင်မာသာထရီစာ တို့လိုလူများစွာလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ခေတ်ကာလတိုင်းမှာ အနိုမ့်ဆုံးလူများ အိမ်ဖော်များကို ကူညီစောင်မသူများဟာ မြင့်မြတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကူညီသူများဟာ အခုဘဝ၊ နောင်ဘဝ အသက်ရှင်သရွေ့ဘဝကိုကျေနပ်မှုရကြပါတယ်။ လူဘဝဆိုတာ ဆန်းကျယ်ပါတယ်။ လျှပ်တပျက်ခဏတာအတွင်းမှာတောင် ဆင်းရဲသားနဲ့သူဌေး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သလို၊ နောင်ဘဝမှာဆို ပိုတောင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူအားလုံး လူကိုလူလိုဆက်ဆံနိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
အခုလိုခေတ်ကာလဆိုးချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေလဲ ပြည်ပထွက်၊ ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ ဖြစ်နေပါတယ်။ လက်ထဲမှာငွေလုံးဝ မတတ်နိုင်သူများအဖို့ စင်ကာပူအိမ်ဖော်အလုပ်က ထွက်ပေါက်ဖြစ်နေပါတယ်။ အေးဂျင့်အများစု ရေနစ်သူဝါးကူထိုး အိမ်ဖော်မိန်းကလေးလုပ်အားခကို ဦးနှောက်ဖောက်စားနေဆဲပါပဲ။ မြန်မာအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အိမ်ဖော်မှန်သမျှ စင်ကာပူမှာအလုပ်ပါမစ် (IPA Permit) နဲ့ပြည်ပထွက်လာတဲ့ အိမ်ဖော်များကို မြန်မာပြည်လေဆိပ်မှာ စီစစ်သင့်ပါတယ်။ လေဆိပ်ဝန်ထမ်းများဟာ မှန်ကန်၊မြန်ဆန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကတဆင့် နာမည်ကောင်းရှိတဲ့ စင်ကာပူက မြန်မာအေးဂျင့်တွေနဲ့ စင်ကာပူလေဆိပ်မှာ အိမ်ရှင်နဲ့အတူကြိုဆိုခြင်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အိမ်ဖော်လေးတွေအတွက် အိမ်ရှင်အနိုင်ကျင့်မှုကို အတိုင်းတာတစ်ခုထိ တားဆီးနိုင်မှာပါ။ အစိုးရကောင်းပါမှ ကောင်းတဲ့အေးဂျင့်လည်း များပြားလာမှာ သေချာပါတယ်။ တချိန်မှာတော့မြန်မာမိန်းကလေးများ ပြည်တွင်းမှာပဲ၊ အလုပ်ကိုင်များနဲ့ လုံလောက်၊ကျေနပ်လာပြီး၊ စင်ကာပူအိမ်ဖော် လုပ်စရာမလိုမဲ့ နေ့ရက်ကို မျှော်လင့်လျှက်ပါ။
1. Met and discussion with Kitty Aye Mar Mar
2. Helping Hands for Immigrant Workers, Singapore – Facebook
3. Moemaka / The Voice artices
4. U Aye Nyein article – Foreign Domestic Worker Law Apr 1, 2014 in Singapore
2 Responses to ဇော်အောင် (မုံရွာ) – အနိမ့်ကျဆုံးသောဘဝကျရောက်နေသူများကို အားပေးကူညီခြင်း (အိမ်ဖော်အကြောင်း စကားလက်ဆုံ)
Zaw Aung on July 1, 2014 at 5:41 pm
တစ်ခုပြင်ချင်တာက helping hands သည် စင်္ကာပူတွင်ရှိသော migrant workers မြန်မာ များကိုသာကူညီသော အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါသည်. HOME ကတော့ စင်္ကာပူတွင်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော NGO တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူမျိုးပေါင်းစုံ Indonesia Philinpino, India, Bangladesh, စသည်တို့ကိုကူညီနေသောအဖွဲဖြစ်ပါသည်။ Kitty Aye Mar Mar
Ko Ko on July 1, 2014 at 5:58 pm
ဒါလောက်များတဲ့ မြန်မာအိမ်ဖော်ရေးရာဌာနတခု စင်ကာပူက၊ မြန်မာသံရုံးမှာဝန်ထမ်း၂ယောက်လောက်နဲ့ ဖြေရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။ တစ်လဒေါ်လာ၄၀၀နဲ့ အိမ်ဖော်၃သောာင်း၊ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁၄၄ မြန်မာပြည်အတွက် ဝင်ငွေရှာပေးနေသူများဖြစ်ပါတယ်။